सातामा लगानीकर्ताको सम्पत्ति ३६ अर्बभन्दा बढी गुम्यो, परिसूचक २७.१७ अंक तल ~ Banking Khabar
गत साताको तुलनामा यो साता शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले रू. ३६ अर्ब २२ करोड गुमाएका छन् ।
दोस्रो बजारमा सर्वाधिक बजार पूँजीकरण यो साता पनि नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीकै कायम भएको छ । उक्त कम्पनीको कुल बजार पूँजीकरण रकम रू. १ खर्ब ६ अर्ब ५ करोड कायम भएको हो । गत साताको तुलनामा उक्त कम्पनीको कुल बजार पूँजीकरण रकम रू. ९७ करोड ५० लाखले वृद्धि भएको छ ।